Izay hahafoy ny ainy... no hamonjy azy
Zoma 21 febroary 2020 — Herinandro fahenina mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 8, 34-39 — Izaho no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana, hoy ny Tompo, tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako.
Eto amin’ity Evanjely ity no voafaritra mazava ny atao hoe: kristianina, tsy fanekena na fanohanana ara-poto-kevitra fa fiainana manahaka an’i Kristy: mizotra amin’izay nodiavina, maka tahaka ny toetrany ary manatanteraka ny nataony.
Ny hazofijaliana no ambaran’i Kristy fa lalana tsy maintsy diaviny; hazofijaliana izay isehoan’ny voninahiny sy ahazoan’ireo manara-dia Azy ny fandreseana, izany hoe: ny fanavotana mandrakizay.
Izy Mpamonjy no nampianatra antsika manara-dia Azy hitondra ny Hazofijaliana, hahafoy ny aina, tsy hivadika amin’ny maha-kristinanina antsika mba iombonantsika anjara amin’ny Fitsanganany ho velona. Tsy mora mantsy ny miaina araka ny Evanjely, ary tsy misy maha-kristianina ny kristianina raha tsy misy fahafoizana ary faratampony amin’ny fahafoizana ny fanaovana martiry ny tena noho ny finoana.
Fampitandremana ho an’ireo kristianina alaim-panahy handà tsy hizotra amin’ny lalana voasoritra ho diavina io tenin’i Kristy, Evanjely nambara tamintsika anio io: dia ireo mety ho endrika fanenjehana sy fisedrana maro mahatonga antsika ho kivy sy tsy hahari-pery amin’ny finoana. Koa enga anie hampandinika sy hanentana antsika izany: iainantsika marina ny maha mpanara-dia an’i Kristy antsika.